norton 4533 days ago
fucheketo 4533 days ago
Visitor from GB is reading श्री ५ आब हत्यो
Visitor from US is reading Girls Fight
Visitor is reading Ticket from DC to Ktm
Visitor is reading Looking for roommate in Fort Worth, Texas
Visitor is reading Have you ever wondered how would Spiderman would look like i
[VIEWED 175116 TIMES]
Posted on 08-19-08 12:29 PM Reply [Subscribe]
Posted on 08-19-08 12:38 PM Reply [Subscribe]
लौ रिट्ठे मलाई भनेको हो? मैले कसैको पनि नाम राखेकी छैन।
अस्ती त्यही फोटो मा कपालमा बर्गन्डी कलर गरेको चै रिट्ठे भनेर यही धागोमा कुरा भएको भएर जिस्काइदेकी, तर मैले बर्गन्डे त खोइ भनेको? तेत्तिकै मलाई भनेछ।
बौचा अब देखी नभन है रिट्ठेलाई बर्गन्डे भनेर। बरु अरु जे जे भन्ने हो भन तिमीहरुको कुरा तर बर्गन्डे भन्यो भने बेक्कार मलाई नराम्रो लाग्छ
Posted on 08-19-08 12:41 PM Reply [Subscribe]
कसैले मेरो मामालाई देख्नु भयो भने भान्जी ले खोजिराछु भनिदिनुस् है। मेरो मामा नै देखिन मैले। अनी भन्जी ले आजको मिती सम्झिराछे पनि भनिदिनुस् है।
Posted on 08-19-08 12:54 PM Reply [Subscribe]
दीपिका नानु धेरै दिन पछी आएछौ। ठुलदाइ लाई भुसुक्कै बिर्सें छौ।
बर्गण्डे भनेको के हो ताअाअाअाअा?
Posted on 08-19-08 12:58 PM Reply [Subscribe]
बिष्टेलाई साँच्ची नै मीतिले बोलायो जस्तो छ। बिष्टेको भान्जीलाई पनि बधाई है।
दीपू, बिहानसम्म त देखेको हो तिम्रो मामालाई। चिया र लड्डु पनि खाएको हो।
Posted on 08-19-08 1:01 PM Reply [Subscribe]
होला होला चिप्ले, मिती आजै को हो। थर्मस मा तातो पानी हाल्दै गरेको देखेथें। लाग्यो होला टेम्पू चढेर थापाथली निर कुन चाँही गृह मा।
लौ बधाई छ, बिस्टे अनी बिस्टेको भान्जी लाई।
Posted on 08-19-08 1:02 PM Reply [Subscribe]
ठुल्दाइको स्टाईलको तारेमाम का साथै आफ्नै स्टाईल को सलाम छ सप्पै लाई।
>>>अनी भन्जी ले आजको मिती सम्झिराछे पनि भनिदिनुस् है। <<<
के भन्छिन दिपीका? बिस्ट्या ७२ रौ जन्मदिन पर्‍योकी के हो?
Posted on 08-19-08 1:07 PM Reply [Subscribe]
बिष्टेको भान्जी लाई नि बधाई छ है, मैले त भुसुक्कै बिर्सेंको
अब बर्गन्डी भन्ने एकजना, बर्गन्डे भन्ने अर्को मलाई के को दोश - होइन र भन्या
>>बौचा अब देखी नभन है रिट्ठेलाई बर्गन्डे भनेर। बरु अरु जे जे भन्ने हो भन तिमीहरुको कुरा तर बर्गन्डे भन्यो भने बेक्कार मलाई नराम्रो लाग्छ<<
ल दिपिकाले भन्दिहाल्यो अब चाँही रिट्ठेलाई बर्गन्डे भनेर बोलाउदिन, कस्तो भनेको कुरा मान्छु नि म,
अनी रिट्ठेलाई अरु जे भने नि हुन्छ रे मेरो साथीले भनेको बर्गन्दे बाहेक
ल गाम्ले हो रिट्ठे लाई के भनी बोलाउने - नाम राख्नु पर्‍यो रिट्ठे को
भन्कुन्डे भन्दा कतो होला - ठिकै होला है
Posted on 08-19-08 1:09 PM Reply [Subscribe]
दोस्रो राउन्ड को जदौ
बिस्टे कही गा छैन एही छु।
भान्जी पनि आईसकेछौ,मिती त आज कै हो तर बद्लेला जस्तो छ।
अनी छैन ठुल्दाइ म थापाथली तिर गाको,जान भनेर त हिजो अस्ती देखी रेडी भर बस्या हो।
बधाई अहिले देखी नै लिदिये फेरी पछी पनि लिउँला।
अहिले सम्म सबै ठीक छ केही नयाँ खबर हुनासाथ सबै लाई अबगत गराउने नै छु।
हस त तारेमाम।
Posted on 08-19-08 1:17 PM Reply [Subscribe]
अबुइ ठुल्दाइ, हजुलाई कहाँ बिर्सिनु नि मैले? अब मेरो त्य्स्तै दिन आएको होला त भन्या? अनी के छ हजुरको हालखबर?
चिप्लु के भन्नु भएको त्यस्तो मिती ले बोलायो भनेर। राम्रो हो कि नराम्रो पनि थाहा पाइन । मेरो मामालाई राम्रो खबर ले चै पक्कै बोलाको हो ल। त्यो चै मै भनिदिन्छु।
नेत्र भन्न पनि कती धेरै भनेको नि ७२ रे। मामा को कुरा गरेकी मैले मामाबुवाको होइन।
लहरे, के बिर्सियौ तिमीले भुसुक्कै? अनी मलाई केस्को बधाई हँ बौचा?
Posted on 08-19-08 1:20 PM Reply [Subscribe]
मामा मैले बिहान देखी सम्झिराथे। अघी काममा आइपुग्ने बित्तिकै चौतारीमा हजुरलाई खोजे देखिन अनी म त मामा आउनु भएन छ भनेपछी पक्कै गूड् न्युज भनेर बसेकी
Posted on 08-19-08 1:22 PM Reply [Subscribe]
के हुँदै छ गाम्ले हो? ब्यापक बधाई आदान प्रदान हुँदै छ नि
बिस्टेकी भान्जिलाई पनि बधाई रे? के को बधाई हो नि फेरी भन्न्जी लाई? आजै बिस्टेको जस्तै बधाई दिन चाँही मन छैन है , अरु नै हो भने बधाई छ
हाम्रो बर्गन्डे खै?
मेरो साथी पनि देखिन्नन त
Posted on 08-19-08 1:24 PM Reply [Subscribe]
सबै जनालाई मेरो पनि जधौ !
Posted on 08-19-08 1:25 PM Reply [Subscribe]
त्यो त तिम्रो मामा लाई नै सोध्दा राम्रो होला
हाम्लाई त के थाहा र, अघी बिहान तिम्रो मलाई एसो बधाई देको त धन्यवाद रे
अब के सम्झेर धन्यवाद दियो मलाई नै थाहा भएन,
एसो अली अली भएको कलेजो प्रयोग गरेको त पत्ता लाई हाल्यो नि, अनी मामा लाई
दिएपछी भान्जी लाई नि दिइहालौ भनेर नि, फेरी बिर्सिन्छ के,
अनी दिपिका ले बुझे पनि नबुझेको जसतै गरेको हो
मैले त नबुझेपनी बुझे जस्तो गरेको हुँ है, कुरा लुकाउने बानी छैन आफ्नो, अरुले पनि त्यसो गरे कसो होला।
Posted on 08-19-08 1:26 PM Reply [Subscribe]
lau mero ni badhai chha hai!!!
बिस्ट्या ७२ रौ जन्मदिन पर्‍योकी के हो? लोल
बिष्टे, थापाथली गएर आउँदा राम भण्डारमा पस्न नबिर्स है। खबर गर्दै गर है।
Last edited: 19-Aug-08 01:34 PM
Posted on 08-19-08 1:33 PM Reply [Subscribe]
फुचे ज्यु आज्काल यतै हो कि क्या हो? सुरुचिको कथा एकदम राम्रो छ फुचेज्यु, अर्को कहिले लेख्ने हो अब?
Posted on 08-19-08 1:34 PM Reply [Subscribe]
आज त राम भन्डार मात्र होइन चोइटेको राज भन्डार् पनि रिजर्ब गरेको होला बिस्टे।
सुन्न त बिस्टे कण्जुस छ भन्ने सुनेको।
यस्तो बेलाँ कन्जुस्याइ नगरनु नि। मौकामा हीरा नि फोर्नु पर्छ भनेर कहिले ६ हो को ७ कक्षामा पढेको।
दिल खोलेर , दिल घोलेर खुवाउनु पिलाउनु पर्छ क्या।
Posted on 08-19-08 1:35 PM Reply [Subscribe]
राम भण्डारमा पार्टि रे ?खोई त हाम्लाई निम्तो ?
जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना है बिष्टे बा लाई ।
Posted on 08-19-08 1:36 PM Reply [Subscribe]